२१.४२ % लगानी वृद्धि : असंगठित क्षेत्रलाई अवकाश कोषमा समेट्ने योजना | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) २१.४२ % लगानी वृद्धि : असंगठित क्षेत्रलाई अवकाश कोषमा समेट्ने योजना
on: March 18, 2019 अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
काठमाडौं । हालसम्म ६ लाख ३१ हजार सेवाग्राहीले लाभ लिइरहेको नागरिक लगानी कोषको कुल लगानी बढ्दै गएको छ । कोषको कुल लगानी गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा २१ दशमलव ४२ प्रतिशत बढेको छ । लगानीको रूपमा हालसम्म रू. १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड प्रवाह भएको छ । गत आवको यही अवधिमा यो रू. ९३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख थियो ।
हाल कोषको लगानीको मुख्य क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप रहेको भए पनि लगानीलाई सकभर विविधीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने प्रयास गरिएको कोषले बताएको छ । कोषले आव २०७३/७४ को तुलनामा आव २०७४/७५ मा १६ दशमलव ६९ प्रतिशत लगानी बढाएको छ । साथै गत असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तसम्ममा लगानी ६ दशमलव ४२ प्रतिशत बढेको छ । बैंकमा राखिएको मुद्दती निक्षेप, आवधिक कर्जा, घर तथा ओभरड्राफ्ट कर्जामा लगानी बढ्दै गएकाले कुल लगानीमा वृद्धि भएको हो । कोषले आव २०७३/७४ मा सरकारी ऋणपत्र, निक्षेप, कर्जा लगायतमा ९१ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख लगानी गरेको थियो । यस्तै आव २०७४/७५ मा उक्त लगानी १ खर्ब ६ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख पुगेको थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा यस्तो लगानी १ खर्ब १३ अर्ब ८३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कोषको खुद मौज्दात रू. १ खर्ब १७ अर्ब १२ करोड बराबर छ । गत आवको यही अवधिमा यो रू. १ खर्ब ४ अर्ब ५७ करोड थियो । कोषको कुल बचत परिचालन गत आवको समीक्षा अवधिको भन्दा १२ प्रतिशत बढेको छ । यसरी विभिन्न बचत योजनामार्फत संकलित रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको रूपमा परिचालन गरिएको छ । यसैगरी आव २०७५/७६ पुस मसान्तसम्ममा कोषको केन्द्रीय हिसाबतर्फको सञ्चालन मुनाफा रू. १९ करोड २ लाख छ भने कोषको कुल जगेडा रकम रू. ४ अर्ब १ करोड २७ लाख पुगेको छ ।
कोषले शुरू अवस्थादेखि नै पूँजीबजार सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म कोषले साधारण शेयर र हकप्रद शेयर गरी रू. ३६ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढीको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्ध सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।
कोषले बचत परिचालन, लगानी व्यवस्थापन र पूँजी बजारलाई मुख्य व्यवसाय बनाएको छ । कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, बीमा कोष आदिको माध्यमबाट लामो अवधिको बचत संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै कोषले नागरिक एकांक योजना, म्युचुअल फन्ड योजनाको माध्यमबाट देश भित्र र बाहिरका सहभागीबाट बचत वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
कोषले संगठित संस्थाको शेयर, ऋणपत्र तथा सरकारी धितोपत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । साथै शेयर खरीद गर्न कर्जा प्रवाह समेत गर्दै आएको छ । संगठित संस्थालाई निश्चित अवधिको ऋण, ग्राहकलाई आवश्यक आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा आदि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले पूँजी बजार सेवाअन्तर्गत संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनका लागि प्रस्ताव भएको शेयर विक्री नभएमा विक्री प्रत्याभूति प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
असंगठित क्षेत्रका मजदूर, कृषक तथा स्वरोजगारलाई अवकाश कोषमा आबद्ध गर्ने योजना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले सञ्चालन गर्दै आएको नागरिक एकांक योजनालाई परिष्कृत गरी उक्त एकांकको कारोबार बढाउन थप पहल गरिने उल्लेख छ । लगानी विविधीकरण गर्दै सम्भाव्य परियोजनामा लगानी बढाइने कोषले बताएको छ ।
यसैगरी शाखा कार्यालयबाट सहभागीलाई कोषले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवा तथा सुविधा सहज रूपमा प्रवाह गर्न उचित व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार तथा हवाई क्षेत्रका परियोजनामा पूँजी जुटाउन पूँजीबजारको औजारको रूपमा रहेको कन्भर्टिबल निष्कासनका लागि निष्कासन प्रबन्धकको रूपमा काम गर्न पहल गर्ने रणनीति बनाइएको कोषले बताएको छ ।
कोषले पूँजीबजार विकासका लागि एक सहायक कम्पनी खडा गरी स्टक डिलरको कार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथै कोषले एउटै प्रकृतिका कार्य गर्ने अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा मध्यम र दीर्घकालीन स्वरूपका बन्ड तथा डिबेन्चरको निष्कासन प्रबन्धकको कार्य गर्ने भएको छ ।
कोषमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम
कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष
लगानीकर्ता हिसाब योजना
निजामती बीमा कोष
शिक्षक बीमा कोष
सैनिक बीमा कोष
नार्क बीमा कोष
नेपाल प्रहरी बीमा कोष
सशस्त्र प्रहरी बीमा कोष
राष्ट्रिय अनुसन्धान बीमा कोष
यस्ता स्किममा कर्मचारी बचत वृद्धितर्फ २ लाख ७ हजार, नागरिक एकांक योजनामा १ हजार ६ सय, उपदान र पेन्सन कोष योजनामा २८ हजार, लगानी कर्ता हिसाब योजनामा १४ हजार तथा बीमा कोष योजनामा ३ लाख ८० हजार गरी ६ लाख ३१ हजारभन्दा बढी सहभागी आबद्ध छन् ।